Fiangonana ho Mosquée?
2007-04-16 @ 10:23 in Finoana
Tsy aiza tsy aiza ity fa eto Antananarivo renivohitry Madagasikara ihany. Tsy angano na habobo fa mbola eo ampanorenana aloha. Efa rentsika ihany angamba fa hanorina fiangonana ny Fikambanana Apokalypsy eto Madagasikara. Eo Vinany Itaosy ho hanorenana azy raha sitrapon’Andriamanitra. Misy zavatra vitsivitsy nanaitra ahy nahatonga ahy hanoratra etoana.
Voalohany, ny endriny ankapobeny : raha jerena tampoka dia Mosquée no hitanao saingy ny tafo no ranombolamena tahaka ny Mosquée d’Al Aqsa ao Jerosalema. Andeha atao hoe mitovy endrika amin’ny fiangonana lehibe an’ny Ortodoksa ihany koa saingy be varavarankely be velarana toy ny fahita eny amin’ny Toeram-pivavahan’ny Silamo hitako eny Ankorondrano mihitsy. Tsy maintsy ho taitra ny tena raha mahita izany ka te-hijery ny zavatra manaraka ihany koa. Efa malaza fa ho lehibe fahatelo manerantany no eritreretin-dry zareo ary ho lehibe indrindra eto Afrika moa izy io. Mahatratra 135m ny halavany sy 42m ny hahavony ary eritreretina hahatafiditra mpivavaka 15.000 eo ho eo izy io, ny sakany moa maherin’ny 40m ihany koa saingy tsy mahatsizoro manko ilay izy fa miendrika roazodafy hafahafa izay ka asa izay ho fivoakany rehefa tena izy.
Misy rihana roa ity trano eritreretina haorina ity ary ny any ambony indrindra dia eritreretina hisy faritra ho fiantsonana angidimby anankiroa (Héliport). Manaraka izany, eritreretina ho parking na fiantsonan’ny fiarakodia mihoatra ny telonjato ny farany ambany. Tsy mikiraro ny miditra ao fa misy efitra ho fitoeran-kiraro fotsiny…ho heno ao izay manam-pofon-tongotra androany…fa hisy toeram-panasan-tongotra eo ampidirana. Io manko no nahataitra ahy faharoa, dia toy izany indrindra ny any amin’ny Mosquée ry zareo a ! saingy noho ny hevitra hafa izay mifandraika amin’izany no anton’ny tsy ampidirana kiraro io fiangonana io : Tsy dabilio no ipetrahana ao fa lafika mihaja, moquette. Raha tombanana fotsiny amin’izao dia saiky ny fomba any amin’ny toeram-pivavahana Silamo no ho tsikaritrao ao anatin’izany fitantarana izany (fa maninona koa ary raha mba asiana sary ?). Saingy efa fantatsika ihany fa lafo dia lafo ny vidin’ny hazoala ankehitriny sady raha dabilio sahazo olona 15.000 izany tena ho goavana be ny fandaniana. Ho sahirana ny olona hitorevaka nefa atao ahoana moa ? Marihina eto ampamaranako ny lahatsoratra fa tsy mifangaro ny lahy sy ny vavy rehefa mivavaka ao amin’ity antokom-pinoana ity.